Ciiddanka Ethiopia iyo Kenya oo lagu wado inay Dagaalamayaasha Alshabaab ka saaraan Jubbooyinka ilaa xadka Kenya | Radio Baidoa
Guriga Barnaamijyada Ciiddanka Ethiopia iyo Kenya oo lagu wado inay Dagaalamayaasha Alshabaab ka saaraan...
Ciiddanka Ethiopia iyo Kenya oo lagu wado inay Dagaalamayaasha Alshabaab ka saaraan Jubbooyinka ilaa xadka Kenya
Ilo Diplomaasiyadeed oo ka tirsan Ururka Midowga Europe “EU” ayaa sheegay inay doonayaan inay Ciiddanka Kenya iyo Ethiopia ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM weerar ku qaadaan Dagaalamayaasha Alshabaab ee weli ku sugan Jubbooyinka.
Wargeyska Axadlaha ee The Sunday Nation ee dalka Kenya ayaa shalay qoray in Madaxda Gobalka iyo Dowladaha deeqda bixiya yeesheen Shir looga hadlay qorshahaasi, xilli ay Dowladaha Midowga Europe sheegeen inay 20% jarayaan Kaalmada Dhaqaale ee ay siiyaan Hawlgalka AMISOM.
Wargeyska oo uu Diplomaasi Reer Galbeed u soo dusiyey Ajendihii looga hadlay Shirkaasi ayaa sheegay in Milliteriga Kenya iyo Ethiopia lagu cadaadinayo inay weeraraan Alshabaabka ku sugan Dooxadda Jubba, lana jaro jidka ay Alshabaab kaga tallaabaan xuduudka Kenya.
Diplomaasigaasi oo codsaday inaan magaciisa la shaacinin ayaa tilmaamay in sida ugu dhaqsha badan loo bilaabi doono hawlgalka ka dhanka ah Dagaalamayaasha Alshabaab ee ku sugan qeybo ka mid ah Jubbooyinka.
Alshabaab waxay muddo hal sanno u adeegsan jireen Jubbooyinka inay ka qaadaan hawlgallada ay ku galaan Kenya, kuna weeraraan Mandera, Garissa iyo Lamu.
Ugu yaraan saddex kun oo Ciiddamo Ethiopian ayaa dhawaan soo gaaray Gobalka Gedo, waxaana la sheegay in ay weerar ku yihiin Dagaalamayaasha Alshabaab ee ku sugan Gobalk Gedo, gaar ahaan Degmadda Baardheere.
Dhinaca kale, Dowladaha ku bahoobay Ururka Midowga Europe waxy qorsheynyaan inay jaraan 20% miisaaniyadda dhaqaale ee ay ku bixiyaan Mushaaraadka Ciiddanka AMISOM, shaqaalaha rayidka ee Loojistikadda, gaadiidka, daawooyinka iyo Kharajka Isgaarsiinta.
Bishii July ee sannadkii hore, Dowladaha EU-da waxay AMISOM siiyeen lacag dhan €750 million oo u dhiganta hal Bilyan oo Dollar ($1 billion).
Askari kasta oo ka tirsan Ciiddanka AMISOM waxa uu bishii mushaar ahaan u qaataa Kun iyo labaatan iyo sideed Dollar ( $1,028).
DHAGEYSO:-Warka Subaxnimo Radio Baidoa 19-10-2021
DHAGEYSO:-Warka Duhurnimo Radio Baidoa 18-10-2021